Waa maxay Qorshaha Midabka Wanaagsan ee kanaalkaaga YouTube? - YTpals
In kasta oo ay u ekaan karto go'aan yar marka hore, go'aan ka gaarista nidaamka midabka wanaagsan ee kanaalkaaga YouTube waa lama huraan si loo xaqiijiyo guushaada goobta. Midabada ayaa la og yahay inay si qoto dheer u saameeyaan shucuurta dadka. Xaqiiqadaas dad badan baa caddeeyey waxbarashada sidoo kale. Indhaha bini'aadamku waxay awoodaan inay kala soocaan inta u dhaxaysa 10 milyan oo midab, qoys kasta oo midabkiisuna wuxuu soo saaraa nooc ka duwan hab-dhaqanka qofka. Markaad u qaabayso bilicda YouTube-kaaga sida saxda ah, waxaad ku dhiirigelin kartaa dadka inay la falgalaan kanaalkaaga.
Maqaalkan, waxaanu ku siin doonaa hage aad ku dooranayso midabada saxda ah ee kanaalkaaga YouTube, kaas oo kaa caawin doona inaad u wado shucuurta daawadayaasha jihada saxda ah.
Fahamka cilmi-nafsiga midabka
Waa inay jiraan waqtiyo aad riixi lahayd fiidiyoow ama kanaalka YouTube hal sabab oo kali ah - palette midab soo jiidasho leh. Dabeecaddan bini'aadamka ah waxaa lagu macnayn karaa iyada oo loo marayo midabka maskaxda. Xaqiiqda arrintu waxay tahay in midab kastaa leeyahay soo noqnoqoshada, hirarka dhererka, iyo spectrum gaar ah. Midab kastaa waxa uu saamayn kala duwan ku leeyahay fikradaha, niyadda, iyo hab-dhaqanka dadka. Halkan waxaa ah dulmar guud oo ku saabsan saameynta midabada kala duwan -
Casaan: Midabkan waxaa loo yaqaanaa inuu kiciyo shucuur xooggan. Waxay ka caawisaa abuurista dareen degdeg ah iyo kordhinta garaaca wadnaha. Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa dhiirigelinta rabitaanka cuntada, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay fiidiyowyada cuntada la xiriira.
Jaale: Midabkani wuxuu muujinayaa diirimaad, farxad, iyo caddayn waxaana loo yaqaanaa inuu kiciyo hababka maskaxda. Jaaluhu waxa kale oo uu kaa caawin karaa dhiirigelinta isgaadhsiinta.
Buluug: Buluugu waa midab aan fiicneyn oo u taagan xasilloonida iyo xasilloonida. Waxay ka caawisaa abuurista dareenka kalsoonida iyo amniga calaamadda tan iyo midabkani waxaa loo arkaa inuu yahay mid joogto ah nolosha aadanaha.
Liinta: Midabkani wuxuu muujinayaa diirimaad wuxuuna sidoo kale ka tarjumayaa xamaasad iyo raynrayn. Waxay si dhow ula xiriirtaa hal-abuurka waxaana loo isticmaali karaa in lagu soo bandhigo sawirka calaamad farxad leh, kalsooni leh, iyo saaxiibtinimo.
Khalad: Midabka guduudan wuxuu u taagan yahay royals, xikmad, iyo guusha, waxaana loo isticmaali karaa in lagu soo bandhigo sawirka calaamad male-awaal iyo hal abuur leh.
Xulashada nidaamka midabka kanaalkaaga YouTube
Hadda oo aad leedahay faham aasaasi ah oo ku saabsan cilmu-nafsiga midabka, waxaan u gudbi doonaa habka xulashada nidaamka midabka kanaalkaaga YouTube. Halkan waxaa ah hab tallaabo-tallaabo ah oo isla sidaas oo kale loo sameeyo -
Ka fikir shakhsiyadda aad rabto inaad ku sawirto kanaalkaaga iyo waxay ku saabsan tahay. Go'aanso qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee sida ugu fiican u qeexaya.
Ka raadi ereyada muhiimka ah sawirada Google ama Pinterest, oo ka fiiri sawirada la xidhiidha ereyada muhiimka ah. Ku keydi sawirada qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah.
Samee loox niyadda adoo isku daraya dhammaan sawirada aad kaydisay. Waxaad u isticmaali kartaa Canva ama tifaftire kasta oo kale ujeedada.
Isticmaal sabuuradda niyadda si aad u doorato dhawr midab oo aad jeceshahay. Ka fakar midabada sida ugu wanaagsan ula socon doona mawduuca kanaalkaaga.
Waxaad dooran kartaa isku dhafka midabada qabow iyo diiran nidaamkaaga midabka, kaas oo kaa caawin doona samaynta calaamadaynta kanaalkaaga. Cidhiidhi ugu yaraan 3 ilaa 4 midab
Laga soo bilaabo liiska midabada la doortay, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato midabada ficilkaaga, midabada asaasiga ah, iyo midabada dhulka. Midabka salku waa inuu noqdaa wakiilka shakhsiyadda ugu sareysa ee kanaalkaaga YouTube. Midabada ficilku, dhanka kale, waa inay ahaadaan kuwa kanaalkaaga ka dhigaya mid soo booda. Waxaad si fiican u rabtaa inaad abuurto farqi weyn oo u dhexeeya ficilka iyo midabada salka. Waxa ugu dambeeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad doorataa midabada dhulka, kuwaas oo loogu talagalay in lagu dheellitiro saldhiggaaga iyo midabada ficilka. Waxay noqon karaan kuwo jilicsan ama mugdi ah, iyadoo ku xiran inta ka hartay midabada aad dooratay.
Marka aad doorato nidaamka midabkaaga, waad la ciyaari kartaa iyaga si aad u aragto sida ay ugu habboon yihiin dulucda kanaalkaaga. Waxa kale oo aad tijaabin kartaa xarfaha iyo asalka si aad uga dhigto calaamadaynta kanaalkaaga. Nidaamka midabka saxda ah, waxaad awoodi doontaa inaad duubto tiro wanaagsan oo muuqaal YouTube ah waqti yar gudaheed.
Taas, waxaan ku soo koobnay wax walba oo ku saabsan doorashada nidaam midab oo wanaagsan kanaalkaaga YouTube. Talooyinka kor ku xusan iyo xeeladaha ayaa kaa caawin doona inaad hoos u dhigto midabada u taagan kanaalkaaga sida ugu fiican, taas oo hubaal ah u horseedi doonta ka qaybgalka dhagaystayaasha. Haddii aad raadinayso siyaabo kale oo aad kor ugu qaadi karto kobaca kanaalkaaga YouTube, markaa YTpals.com ayaa adiga kuu ah. Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan sida jecel YouTube bilaash ah iyo daawashada YouTube ee bilaashka ah, kuwaas oo kaa caawin kara kobaca dabiiciga ah ee kanaalkaaga. Anaga, haddii aanu nahay YTPals, waxaanu sidoo kale bixinaa 100% dammaanad badbaado dhammaan adeegyadayada. Haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah adeegyadayada YouTube-ka qaaliga ah, waad nala soo xidhiidhi kartaa maanta!
Waa maxay Qorshaha Midabka Wanaagsan ee kanaalkaaga YouTube? waxaa qoray YTpals Writers, 26 April 2022
Sidee Loo Dhiirrigeliyaa Podcast-kaaga YouTube-ka?
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah nooc ay abuuri karto inay isku kobciso booska dijitaalka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira wax ku saabsan Podcast-ka taas oo u horseedaysa inay si aad ah u soo jiito xilliyadii ugu dambeeyay….
Waa maxay Sababtu YouTube-ka ayaa Muhiim u ah Helitaanka Macaamiisha - Maxaad Ogaaneysaa
Laga yaabee inaysan u muuqan markii hore, laakiin macaamiishu waa xoogga nolosha YouTube. Waxay u oggolaadaan barxadda inay baraaraan oo ay u suurta geliyaan in abuurayaasha shaqadooda la arko. Tani, markooda, waxay sameysaa…
Tilmaamahaaga Isticmaalka Kaararka YouTube Sida Toosan
Haddii aad raadineyso habab aad ku kasbato kaqeybgal badan fiidiyowyadaada YouTube, waxaan leenahay dhab ahaan waxaad raadineyso! Kaararka YouTube waa aalad wax ku ool ah oo lagu suuq geeyo kanaalkaaga YouTube laguna wado and